Dhibatoyinka Ardayda Soowajaho Xiliga Waxbarashada | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Wakhtigaaga Illaasho, Beddel Hab Fikirkaaga
Waa Kumaa Hogaamiyaha “Xisbullaha Nigeria”?
Gabadhii Geesiyadda Ahayd ee La Saaxiibtay Qabqablaha Arxanka Daran
Halista wadna garaacida aan caadiga ahayn ||Tukesomalism.com
Abshiro Axmed Cabdi — July 6, 2019
Dhibatoyinka Ardayda soowajaho xiliga waxbarashada waxaa kamid ah
1- Barasho la’aan: Arday badan ayaa barata habeenkii imtixaanka, dabcan tani badanaaba kama caawineyso inuu xasuusto xilliga imtixaanka
2- Kalsooni daro xasuusta: marka ardaygu ku celiyo naftiisa oo rumaysan in xasuustiisa uu daciif yahay oo aan awood u laheyn inuu waxyaalahaa badbaadiyo si xun u saameeyo fulinta xasuusta.
3- Dhibaatooyinka joogtada ah.
Waxyalah ugu horeeyo ee xoojiyo xasuusta waqtiga daraasada.
1- Waa in aan xoojinnaa xidhiidhka aan la leenahay Alle subxanahu watacaalaa. waa in aan joogtayni cibada Alle iyo in aan Ilaaha Qaadirka ah waydiisanno inuu na caawiyo si aan u helno yoolkayaga, maaddaama hadii aan maskaxdayadu aanku jirin wax ka mid ah arrimaha cibaadada waa maskax dhintay ama aan jirin.
2- Qofku waa inuu isku dayaa inuu heegan u ahaado xaaladaha oo dhan, maadaama uu wax-ka-qabashadu tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka hortagaya xusuusta ka timaadda shaqada, iyo feejignaan wanaagsan wuxuu caawiyaa xawaaraha iyo xusuusinta dambe.
3- Cun raashin yar oo leh qudaar isku dheeli tiran kuwaas oo awood u leh in ay hormaraan unugyada maskaxda ku jira.
4- Qofku waa inuu sameeyaa jimicsiyo caawiya dhiiga maskaxda si wax U xasuusto.
Sababta xasuusta liita iyo illoobidda ayaa ka imaaday nafaqo liidato iyo la’aanta helitaanka faa’iidooyin muhiim ah u nolol maalmeedka , daciif tinimada xasuusta waxay u baahan tahay in la qaato fitamiin sida fitamiin B6 (B12). Iyo walxaha (zinc, iron, folic acid) waxay labalaabeysaa awooddeena isku dheelitirnaanta illaa afar jeer awoodda caadiga ah insha Allah.
Waxaa jira todobo fitamiin oo muhiim u ah maskaxda, fitamiin B, B1, B2, B3, B5, B6, iyo biotin, sidoo kale fiitamiin C, oo loo baahan yahay in lagu beddelo karbonhidatadaka tamarta maskaxda.
Hababka iyo talooyinka lagu xoojinayo
Isku day inaad xasuusato macluumaadka adigoo adeegsanaya calaamado iyo macluumaad wakhti dheer ah oo ku badbaadi xusuutada, si ay u tilmaamaanto mid kasta oo ka mid ah macluumaadka gaarka ah.
Muuji maskaxdaada adigoo baranaya waxyaabo cusub oo aan ahayn wax laguugu soo dhigay, sida barashada luqad cusub ama xirfado cusub oo balaariyo awooddaada fikirkaaga iyo ilaalinta.
caawi maskaxda si loo helo macluumaadka, u samee oo u xafido si habboon, hurdo la’aantu waxay burburin doontaa xasuusta waxayna hoos u dhigeysaa awoodda uu qofku wax ku barto sababtoo ah wuxuu dareensan yahay raaxo la’aan.
Jimicsigu wuxuu cawiyaa maskaxda, gaar ahaan jimicsiga jidhka, kaas oo kordhiya socodka dhiigga dhammaan qaybaha jidhka oo ay ka mid yihiin maskaxda, sida dabaasha iyo orodka, u diyaargarow in uu sameeyo fekrado iyo nasasho waxay caawin doonaa maskaxda si uu u helo oksijiin ku filan si uu u guto shaqadiisa si habboon.
Hal hawleed iyo hal shaqo waxay caawin doontaa maskaxda si ay u diyaariso macluumaadka iyo fikradaha iyo inay ka caawiso sidii ay u fulin lahayd shaqadeeda si haboon oo looga fogaado xiisaha.
Dadka qaarkood waxay ku dhacdo diidmo la’aan sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin illowsho iyo guulo waxbarasho oo liidata. Waxaa jira siyaabo badan oo macquul ah oo loo kordhiyo diirada, sida cunista cuntooyinka qaarkood iyo waxyaabo kale, ama leyliyo fudud.
Si loo gaaro dareenka la doonayo, waa in ay jiraan xaalado iyo duruufaha jawiga ku hareeraysan, waana in ay waalidiinta siiyaan shuruudo ay wax ku bartaan ilmahooda si ay u awoodaan inay wax bartaan oo ay diirada saaraan. Jawiga daraasaddan way ka duwanaan kartaa hal arday kale, qaar kalena waxay u baahan yihiin jawi degan si ay u gaaraan firfircoonida, kuwa kalena ma dareemaan xasilloonida sida nalalka, sidaas darteed waalidiintu waa inay ogaadaan waxa ku jiro ilmahooda si ay u hubiyaan Daraasada iyo guusha ugaaray.
Tags: Dhibatoyinka Ardayda Soowajaho Xiliga Waxbarashada
Next post Kobaca Garashada iyo Fahanka
Previous post Macdanta Ku Jirta Jirka Bani'aadamka 'Electrolytes
Barashada Habka ugu Fiican ee Caruurta Loo Tarbiyeeyo Loona Barbaariyo 13.83 views per day | by Mawliid Axmed Xassan